Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » Xeer ilaaliyaha Guud Oo Diignin U diray Ganacsatada Dhuxusha Dhoofisa Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Qoraal uu soo saaray Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Axmed Cali Daahir, ayaa wuxuu kaga hadlay dhoofinta dhuxusha sharcidarada ah ee Somaliya.
Ganacsatada Somaliyed ayuu u diray digniintaan uu soo saaray Xeer ilaaliyaha Qaranka, waxaana ay u qornayd sidan.
Soo saaridda iyo dhoofinta dhuxushu waxay saamayn laxaad leh ku leedahay xaalufinta deegaanka, nabadgalyada iyo dhaqaalaha. Waxayna il wayn oo dhaqaale u tahay maleeshiyaadka iyo ururada argagixisada sida Al-Shabaab.
Inkastoo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay mamnuucay soo dejinta iyo dhoofinta dhuxusha Soomaaliyeed haddana wadamada Imaaraadka Carabta Midoobay, Baxrayn, Kuwayt, Cummaan iyo Iiraan ayaa u ah suuq muhiim ah dhoofinta dhuxusha Soomaaliyeed.
Dhoofinta dhuxusha waa fal-dambiyeed lagu ciqaabi karo Xeerka Ciqaabta Soomaaliyeed. Xafiiska Xeer-Ilaaliyaha Guud ee Qaranka isagoo la kaashanayaa Dawladaha Xubnaha ka ah Federaalka wuxuu baaris qoto-dheer ku hayaa ka ganacsiga dhuxusha sharci darrada ah.
Xafiiska Xeer-Ilaaliyaha Guud ee Qaranka wuxuu adkaynayaa in si buuxda loo fuliyo Sharci Lr. 6 (25/10/1969), Qaraarka Golaha Wasiirada Lr. 30 (19/04/2018), Qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay S/RES/2036 (2012) iyo ee ku saabsan mamnuucidda, dhoofinta iyo soo dejinta dhuxusha Soomaliyeed si dadban ama si toos ah xataa haddii aanay dhuxushaasi Soomaaliya toos uga imaanin.
Xafiiska Xeer-Ilaaliyaha Guud ee Qaranku wuxuu la kaashanayaa baarista fal-danbiyeedkan iyo fulinta shuruucdaba hay’adaha sharci-fulinta caalamiga ah sida Afripol, Interpol iyo dalalka kale ee aan xiriirka wada shaqayneed leenahay.
Dawladda Soomaliyeed waxay waydiisanaysaa ciidamada Caalamiga ah ee ka hawlgala badaha Soomaaliya ee la dagaalama burcad-badeedka iyo kalluumaysiga sharci-darrada ah inay hawlgaladooda ku darsadaan la dagaalanka dhuxusha sharci-darada ah.
Xafiiska Xeer-Ilaaliyaha Guud ee Qaranku wuxuu ku adkaynayaa Hay’adaha Amniga Soomaaliyeed iyo AMISOM inay ku baraarugsanaadaan falalkaas sharci darrada ah wuxuuna ku boorrinayaa inay ka qaybqaataan baarista iyo fulinta Qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay S/RES/2036 (2012) ee ku saabsan mamnuucidda dhoofinta iyo soo dejinta dhuxusha Soomaliyeed iyo Xeerka Ciqaabta Soomaaliyeed.
Xafiiska Xeer-Ilaaliyaha Guud ee Qaranka wuxuu amrayaa doomaha iyo maraakiibta lagu raro dhuxusha iney ka waantoobaan fal dambiyeedka wuxuuna caddeynayaa in lala wareegayo iyadoo loo marayo sida ay qabaan shuruucda dalka.
Alshabab oo werar Culus ku qaaday Degmada Qoryooleey